Khadka Waxsoosaarka Neef Bacriminta NPK Xarunta - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Waxaan leenahay waayo-aragnimo dhammaystiran oo ku saabsan khadka waxsoosaarka maqaarka ee qalalan. Waxaan kaliya diirada saareynin xiriir kasta oo geedi socodka wax soo saarka ah, laakiin sidoo kale marwalba waan qabsanaa faahfaahinta geeddi-socodka ee xariiq kasta oo wax soo saar ah oo si habsami leh ayaan ku gaari karnaa isku-xirnaanta. Nidaamka wax soo saarka oo dhameystiran waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee iskaashiga aad la leedahay Yizheng Heavy Industries. Waxaan ku siinaa xalalka wax soo saarka habka loo habeeyay iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah ee macaamiisha.
No line-soo-saarka granulation extrusion qalajinta soo saari kartaa bacriminta xarunta fiirsashada sare, dhexdhexaad iyo hoose ee dalagyo kala duwan. Khadka wax soo saarku uma baahna inuu ahaado mid qallalan, maalgashi yar iyo tamar yar.
Rullaluistemadka iyada oo aan qallajin granulation-ka soo-baxa ayaa loo qaabeyn karaa qaybo ka mid ah qaabab iyo cabbirro kala duwan waana la soo saari karaa si loo soo saaro cabbirro kala duwan
Bacriminta isku-dhafka ahi waxay leedahay astaamaha isku-dhafka isku-dhafka, midabka dhalaalaya, tayada deggan, iyo kala-daadashada fudud ee ay ku milmaan dalagyada. Gaar ahaan, waa mid badbaado u leh abuurka inuu koro bacriminta. Ku habboon dhammaan noocyada carrada iyo qamadiga, galleyda, qaraha iyo miraha, lawska, khudradda, digirta, ubaxyada, geedo miro leh iyo dalagyo kale. Waxay ku habboon tahay bacriminta aasaasiga ah, bacriminta, cayrsashada cayrsashada, bacriminta iyo waraabka.
Qalabka ceyriinka ee soosaarka bacriminta isku jira waxaa ka mid ah urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, dareere ammonia, ammonium monophosphate, diammonium phosphate, potassium chloride, potassium sulfate, oo ay ku jiraan dhoobada qaar iyo buuxiyo kale. Qalabyo kala duwan oo dabiici ah ayaa lagu daraa iyadoo loo eegayo baahida ciidda:
5. Dhoobo: dhoobada magaalooyinka, dhoobada webiga, dhoobada filterka, iwm.
Waxaan bixinaa xirmo dhammeystiran oo ah khadadka waxsoosaarka maqaar-soo-saarka maqaar-laaweyaasha aan qallalanayn ee aan u baahnayn in la qalajiyo. Qalabka khadka wax soo saarka badanaa waxaa ka mid ah mashiinka, qalabka wax lagu rido, qalabka wax lagu duubo ee mashiinka, mashiinka wax lagu xiro, mashiinka suunka, mashiinka baakadaha ee otomaatiga ah iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah.
1. Qalabaynta cadaadiska farsamada waxaa loo isticmaalaa kuleyl la'aan ama qoyaan cayriin alaabta ceeriin.
2. Ku habboon alaabta ceeriin ee kuleylka leh, sida ammonium bicarbonate
3. Looma baahna in la qalajiyo geedi socodka, iyada oo maalgashi yari jiro iyo tamar yaraanta.
4. Ma lahan biyo wasakh ah, qiiqa gaaska qiiqa, wasakhaynta deegaanka.
5. Qeybinta cabbirka walxaha waa isku mid, mana jiro kala soocid iyo agglomeration.
6. Qaabdhismeedka is haysta, tikniyoolajiyad casri ah, hawlgal deggan iyo dayactir habboon.
7. Si fudud loo hawlgalo, fududahay in la ogaado xakamaynta otomaatiga ah, iyo hagaajinta waxtarka wax soo saarka.
8. Waxaa jira noocyo badan oo codsiyo alaab ceyriin ah oo aan loo baahnayn waxqabad gaar ah.
No line-soo-saarka granulation extrusion qalajinta waxaa ka mid ah batcher toos ah, conveyor suunka, fiicni double-dhidibka, feed sheyga, mashiinka granulation extrusion, mashiinka baaritaanka rullaluistemadka, bakhaar dhammeeyey, mashiinka baakadaha automatic, iwm
1. Mashiinka Dufanka Dynamic
Mashiinka mashiinka otomaatigga ah wuxuu quudiyaa alaabta ceyriinka ah iyadoo loo eegayo cabir kasta oo qaacido ah, kaasoo si otomaatig ah u dhameystiri kara howsha baaxada leh saxsanaanta iyo waxtarka sare, si loo hubiyo tayada bacriminta. Maaddooyinka ka dib, maaddada waxaa loo qaadaa isku-darka labada dhudhun.
2. Double Shaft Bacriminta fiicni
Mashiinka wax lagu qaso wuxuu adeegsadaa qalabka wax lagu dhimo ee cirbadaha cirbadaha loo yaqaan 'cycloid wheel wheel reducer' si uu u kaxeeyo dunmiiqa, ka dibna uu u kaxeeyo garabka walaaqaya si uu u wareego oo u walaaqo. Iyada oo isdaba-joog ah oo isdaba-joog ah oo ka soo baxa garbaha oo ku yaal gacanta isku dhafan, qalabka ceeriin ayaa si buuxda isugu dhafan. Maaddada isku dhafan waxaa laga soo saaraa marinka hoose ee dhinaca hoose. Diskku wuxuu qaataa saxanka polypropylene ama dahaarka birta birta ah, oo aan sahlaneyn in lagu dhejiyo oo fudud oo wax ku ool ah.
Waxyaabaha ceyriinka ah ee isku dhafan waxaa laga soo qaadaa qalabka wax lagu rakibo ee suunka ah, taas oo xitaa si isku mid ah ugu dirta walxaha afarta caag ee wax lagu rido ee hoos imanaya quudiyaha iyada oo loo marayo hopper. Mashiinka ayaa ku tuujinaya maaddada guntiga jajaban ee hoosta gawaarida iyada oo loo marayo rooga-sare ee rooga sare, ka dibna wuxuu kala soocayaa walxaha loo baahan yahay maaddaama oo ay laba-dhudhun laba-gees u leexsan tahay. Rullaluistemadka waxaa laga sameeyey wax dahaadhay u adkaysta daxalka, xirmooyinka u adkaysta iyo wax daweynta u adkaysta saameynta.
Qaybaha kala-soocida ba'an ee loo yaqaan 'granulation granulation' ayaa loo sii qaadaa shaandhada shaashadda iyadoo loo sii marinaayo suunka xambaara, iyo jajabyo aan tayo lahayn ayaa ka soo baxa qaybaha waaweyn ee ka soo baxa dhinaca daloolka shaashadda, ka dibna waxaa loo sii qaadaa keydiyaha maqalka ee kala-soocidda heerka labaad, iyo qaybaha u qalma ayaa laga quudiyaa qaybta hoose ee ka baxda oo loo qaado aagga dhammaaday.
5. Mashiinka Baakadaha Tirada elektarooniga ah
Iyada oo loo marayo jasiiradda, jajabyada aqoonta u leh ayaa lagu cabiray tiro ahaan, ka dibna waxaa lagu duubaa mashiinka baakadaha oo otomaatig ah.